စကားကြီးဆယ်ခွန်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Congratulations Muhammad Danial Zuraidi (California Umno Club chairman)
Biographies of Myanmar Muslims under Burmese Kings »
ရေးကူးရာတွင် ရေညာမှ ကြိုတင်ကူးသွားမှ လိုရာ ရောက်နိုင်သကဲ့သို့ မိမိ ဆိုလိုချက်သို့ ရောက်အောင်ကြိုတင်ပြောဆိုခြင်း။
ကောက်ပင်များကို လက်တဖက်ဖြင့် မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ကာ ကျန်လက်တဖက် မှ တံစဉ်ကိုကိုင်ကာ တိခနဲနေအောင်ရိတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ သူတပါးပြောသော စကားကို မိအောင် ချုပ်မငုံမိအောင် ဖမ်းကိုပြီးမှ မိမိက ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောဆိုခြင်း
၃. ရေစီး ဖောင်ဆန်စကားပြောနည်း
လိုအပ်သော ပစ္စည်းမှန်သမျှကို ဖောင်ပေါ်တင်ဆောင်ပြီး ရေဆန်သို့တက်လျှင် လိုရာခရီးကို ကောင်းစွာ ရောက်နိုင်သကဲ့သို့အောက်ခြေသိမ်း အကြောင်းအရာများကို ဥပမာ ဝေဆာစွာဖြင့် ပြီးပြတ်အောင် ပြောဆိုခြင်း
ထမင်းချက်သောအခါ အိုးနှင့် ဆန်တန်ရုံထည့်ကာ ချက်ပါက ထမင်း ကောင်းစွာ ကျက်သကဲ့သို့ ကို့ ဂုဏ်နှင့် တန်ရုံ ပြောဆိုခြင်း
၅. ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့ စကားပြောနည်း
ဆီထွက် သီးနှံ အဆန်များကို ကျည်ပွေ့ဖြင့် အထပ်ထပ် ဆီပွတ် သကဲ့သို့ မိမိရည်မှန်းချက်ပြီးစီးအောင် အထပ်ထပ်ပြောဆိုခြင်း
၆. ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် စကားပြောနည်း
ဆင်က မိမိအား ထိုးဝှေ့ရန် လိုက်သောအခါ ရှောင်ခွာ ပြေးရသကဲ့သို့ မိမိထံသို့ ကျရောက်လာမည့် စကားကို ရှောင်လွှဲပြောဆိုခြင်း
မိမိတို့ လုပ်မည့် လယ်ယာကွက် အား ချုံနွယ် ပိတ်ပေါင်း များကို ဦးစွာ ရှင်းလင်းပြီးမှ သစ်ပင်တို့ကို ရှင်းလင်းရသကဲ့သို့ စကားငယ် အသေးအဖွဲများကို ပြောကြားပြီးမှ စကားကြီးစကားကျယ် ကို ပိုင်နိုင်အောင် ပြောဆိုခြင်း
၈. ကြက်ဆုတ်ခွပ်ပစ် စကားပြောနည်း
ကြက်များခွပ်သကဲ့သို့ နောက်ဆုတ်အားယူပြီး နိုင်လောက်မှ ခွပ်သကဲ့သို့ သူ့စကားကို အလိုက် အထိုက်ပြောကာ အသာစီးရမှ စကားကိုပြီးအောင်ပြာဆိုခြင်း
၉. ရေစစ်ပမာ စကားပြောနည်း
ရဟန်းသံဃာများသုံးသော ရေစစ် တမျိုးကဲ့သို့ ထိုရေစစ် ကို ရေထဲ တွင် နှစ်ကာ ရေပြည့်မှ ထိပ်က အပေါက်ကို လက်ညိုးဖြင့် ပိတ်ပြီးဆွဲပါက ရေထွက်မကျပဲ အပြည့်ရှိသကဲ့သို့ သူတပါးပြောဆိုခွင့် မရအောင် ပိတ်ဆို့ပြောဆိုခြင်း
ဆန် ပဲ တို့ကို ထောင်းသောမောင်းကို နင်းသောသူသည် တဖက်သို့ လိုက်ပါမသွားအောင် ကောင်းစွာ ဖိနင်းရသကဲ့သို့ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ စကားကို တက်သာ ဆုတ်သာ ဖြစ်အောင် မတင်မကျ ပြောဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။
This entry was posted on October 20, 2010 at 1:59 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.